Dowladda Soomaaliya oo hub farabadan geeysay Magaalada Dhuusamareeb - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo hub farabadan geeysay Magaalada Dhuusamareeb
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay maanta Hub farabadan iyo Rasaas ka dejisay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul Goboleedka Galmudug.
Garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ee Ugaas Nuur ayaa waxaa ka degtay Diyaarad sidday sida la sheegay Hub badan iyo rasaas, waxaana la sheegay in hubkaasi loo waday Ciidanka dowladda ee ku sugan Galmudug iyo kuwa Galmudug, kaasi oo la sheegay in loogu tala galay in Ciidanku ay sii laba jibbaaraan dagaalka ay kula jiraan dagaalamyaasha Al-shabaab, oo dhawaanahaan howlgallo ka dhan ah ay ka socdeen degaanada Maamulkaasi Galmudug.
Hubka ay dhiibtay dowladda Soomaaliya ee ay ku wareejisay Ciidanka ku sugan Galmudug ayaa la sheegay in uu ka kooban Rasaas farabadan iyo hubka noocyadiisa kala duwan, waxana sidday diyaarad khaas ah sida wararku sheegayaan.
Ciidanka ku sugan degaanada Galmudug ayaa la sheegay in ay dhawaan billaabin doonaan howlgallo culus oo Al-shabaab lagula dagaalamayo.
Dhawaan degaanno iyo degmooyin ka tirsan maamulka Galmudug aya waxaa ka socday howlgallo ballaaran oo ay wadeen Ciidanka Maamulka Galmudug iyo kuwa dowladda eek u sugan degaanada Galmudug, waxaana howlgaladda ugu culus ay ka dhaceen duleedka Dhuusamareeb oo ah Caasimadda Galmudug.
Previous articleRW Rooble oo Amar culus dul-dhigay Madaxda Maamulka Gobolka Banaadir
Next articleCiidamo ka tirsan Galmudug oo Caawa gadood sameeyay